नेत्रहीन युवा संघ रुपन्देहीले लुइज ब्रेल दिवस मनायाे, काे हुन लुइज ब्रेल ? « Janasahara
नेत्रहीन युवा संघ रुपन्देहीले लुइज ब्रेल दिवस मनायाे, काे हुन लुइज ब्रेल ?
पुस २० रुपन्देही – नेत्रहीन युवा संघ रुपन्देहीले २१३ औं लुइज ब्रेल दिवस मनाएकाे छ।
उक्त दिवसकाे अवसरमा रुपन्देही जिल्ला अन्तर्गतका वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय,पब्लिक माध्यामिक विद्यालय, गणसारी माध्यमिक विद्यालय र मैनैया माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुको निम्ति लुइज ब्रेल र ब्रेललिपीको बारेमा अभिमुखिकरण सम्पन्न गरिएकाे छ।
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा ४५० जना भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेका विद्यार्थीलाई लुइज ब्रेल र ब्रेललिपीको बारे स्पष्ट पारिएको संस्थाका फिल्ड अधिकृत अस्मिता क्षेत्रीले बताइन।
कार्यक्रममा वीरेन्द्र मा.वि छपियाका श्रोत शिक्षक लोकनाथ साप्कोटा ,सस्थाका अध्यक्ष टिकाराम पौडेल ,उपाध्यक्ष जीवन पोखरेल, काेषाध्यक्ष कमला पौडेल सदस्य गंगा भुसाल, राम बहादुर थापा र माधब कडेलले सहजिकरण गरेका थिए।
काे हुन लुइस ब्रेल ?
लुइस ब्रेल ब्रेलका सृष्टिकर्ता हुन् – एउटा कोड जसले दृष्टिविहीन र दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा पढ्न र लेख्न सक्षम बनाउँछ। उनको रूपान्तरण प्रणाली आज पनि दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्छन्।
लुइस ब्रेल, ४ जनवरी १८०९ को जन्म, फ्रान्स को एक सानो शहर Coupvray मा थिए। उनि र उनका तीन दाजुभाइहरू आफ्ना आमाबाबु मोनिक ब्रेल र साइमन-रेने ब्रेलसँग बस्थे। लुइसका बुबाले गाउँको काठीको रूपमा कामदार थिए।
एक जवान केटाको रूपमा, लुइस प्रायः आफ्नो बुबाको कार्यशालामा खेल्न समय बिताउँथे। एक दिन, तीन वर्षको उमेरमा, उसले छालाको टुक्रामा औलाले प्वाल बनाउन खोज्दै थियो। जब उसले थिच्यो, तिखो औजार चिप्लियो र उनको एक आँखामा प्रहार भयो। लुइसको क्षतिग्रस्त आँखाको उपचार हुन सकेन र त्यसपछिका हप्ताहरूमा जवान केटाको आँखा नराम्ररी संक्रमित भयो। उनको अर्को आँखामा पनि संक्रमण फैलियो । जब उनी पाँच वर्षको थिए, लुइस दुवै आँखाले पूर्ण रूपमा अन्धा भइसकेका थिए।
एक लगनशील र उज्ज्वल विद्यार्थी, १० वर्षको उमेरमा लुइसले संसारको पहिलो दृष्टिविहीन विद्यालयहरू मध्ये एकमा भाग लिन थाले: पेरिसमा अन्धा युवाहरूको लागि रोयल संस्था। लुइस ब्रेललाई ‘रात लेखन’ को परिचय दिइन्छ दृश्य शिक्षकहरू द्वारा एड र यसको प्रयोगको लागि धेरै प्रतिरोध थियो। यसको मतलब दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूले एक्लै र आफ्नै समयमा ब्रेल पढ्नुपर्ने थियो। लुईले अध्ययन र सिकाएको रोयल इन्स्टिच्युटमा पनि ब्रेल १८५४ सम्म पाठ्यक्रममा थिएन।
४० वर्षको उमेरमा, लुइसले लामो समयदेखि श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको बिग्रिएको कारण संस्थानमा आफ्नो शिक्षण पोस्ट छोड्नुपर्‍यो। उनी आफ्नो गृहनगर कूपभ्रेमा फर्किए। उनको मृत्यु ६ जनवरी, सन १८५२ को रोयल इन्स्टिच्युटको इन्फर्मरीमा भयो।
लुइस ब्रेलका दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूको आग्रहमा ब्रेल अन्ततः दुई वर्षपछि रोयल इन्स्टिच्युटमा पेश गरियो। १९ औं शताब्दीको उत्तरार्धमा ब्रेल विश्वका सबै देशहरूमा विस्तार भएको थियो। वर्षौंको दौडान, ब्रेल प्रविधिले ब्रेल लेखन मेसिनको रूपमा विकास गरेको छ – ब्रेल वर्णमालालाई कागजमा स्थानान्तरण गर्ने कुञ्जीहरू भएका टाइपराइटरहरू – आधुनिक समयका इलेक्ट्रोनिक ब्रेल नोट-टेकरहरू र ब्रेल अनुवाद सफ्टवेयरमा। लुइस ब्रेलको सम्झना लुइस ब्रेलको विरासत उनको ब्रेल कोडमा बाँचिरहेको छ ।
लगभग दुई शताब्दी पछि उसले पहिलो पटक यसलाई विकास गर्न थाल्यो। लिखित शब्दलाई विश्वभरका लाखौं अन्धो र दृष्टिविहीन मानिसहरूलाई खोलेर। सन १९५२ मा फ्रान्सेली सरकारले अन्ततः लुइस ब्रेलका उपलब्धिहरूलाई मान्यता दियो। उनको शव कुपभ्रेको गाउँको चिहानबाट निकालिएको थियो र पेरिसको प्यान्थियोनमा पुन: गाडिएको थियो। जहाँ भोल्टेयर र जीन-ज्याक रुसो लगायतका अन्य प्रसिद्ध फ्रान्सेली व्यक्तित्वहरूलाई पनि राखिएको थियो। लुइसको हात कुपभ्रेमा गाडिएको थियो। आज कूपभ्रेमालीको बाल्यकालको घर। सूचीबद्ध भवन लुइस ब्रेल संग्रहालयको स्थान पनि हो। विश्व ब्रेल दिवस हरेक वर्ष जनवरी ४ मा लुइसको जन्मदिनमा मनाइन्छ।
प्रकाशित मिति : २०७८ पुष २० गते मङ्गलवार
नेत्रहीन युवा संघ
हाेटल संचालन गरि अनैतिक कार्य गर्ने ३ जना हाेटल संचालक पक्राउ
सल्यानमा सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनकाे बैठक सम्पन्न
मालपोत सल्यानका कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवाहरु बन्द